Bale ayaa ku eedeeyay Real Madrid inaysan u ogolaan inuu ka tago kooxda –
Home SUUQA IIBKA Bale ayaa ku eedeeyay Real Madrid inaysan u ogolaan inuu ka tago...
Bale ayaa ku eedeeyay Real Madrid inaysan u ogolaan inuu ka tago kooxda
Weeraryahanka Real Madrid, Gareth Bale, ayaa ku eedeeyay kooxda inaysan u ogolaan inuu ka tago Santiago Bernabeu.
Wuxuu sidoo kale sheegay inay isaga u fiicneyd inuu dareemo qaddarin markii uu ku biirayo xulka qaranka Wales.
Bale ayaa ku dhawaaday inuu ka tago Real Madrid xagaagii hore si uu ugu biiro Shiinaha, laakiin waxaa laga xanibay daqiiqadii ugu dambeysay.
“Waa wax fiican inaan dareemo inaan ku qanacsanahay Wales,” Bale ayaa u sheegay Sky Sports News ka hor kulamada Wales ‘UEFA Nations League ee ay la ciyaarayaan Finland iyo Bulgaria khamiista iyo axada siday u kala horreeyaan.
“Waxaan isku dayay inaan ka tago Real Madrid. Naadigu wuxuu ka dhigayaa waxyaabo aad u adag. Waxaan ku jiraa qandaraas, sidaas darteed waxay ku jirtaa gacanta naadiga.
“Waxaan isku dayay inaan baxo sanadkii la soo dhaafay, laakiin waxay xannibeen wax walba ilbiriqsigii ugu dambeeyay. Wuxuu ahaa mashruuc aan aad ugu riyaaqay, laakiin ma hirgelin.
Waxaan ahay 31 jir kaliya, laakiin waxaan dareemayaa inaan wali kujiro qaab fiican hadana waxaan dareemayaa inaan haysto wax badan oo aan bixiyo. Waan arki doonaa waxa dhaca. Waxay ku jirtaa gacanta naadiga, laakiin waxay ka dhigayaan waxyaabo aad u adag, in si daacad ah loo hadlo. ”
WARARKA: Kroos ayaa shaaca ka qaaday waxa ay tahay inuu sameeyo Messi si uu uga tago Barcelona una aado Real Madrid
Bale ayaa Real Madrid kaga soo biiray kooxda Tottenham Hotspur sanadkii 2013 markaas oo uu aduun lacageed dhan 86 milyan oo Gini ku qaatay rikoorka adduunka.
Waqtiga garabka ka ciyaara ee Real Madrid ayaan u socon sidii loogu talagalay, maadaama uu qaboojiyay tababaraha kooxda, Zinedine Zidane.
Waxa uu kaliya u saftay 20 kulan kooxda heysata horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii hore kaliya labo ka mid ah ayaa yimid ka dib markii dib loo bilaabay kubada cagta ka dib markii la xiray COVID-19.
Bale laba sano ayaa uga harsan qandaraaskiisa haatan ee Real Madrid.